riot – Gaming Noodle
ယခုလအတွင်း ထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends: Wild Rift (Alpha ဗားရှင်း) ထဲမှာ ဘာတွေပါလာမလဲ?
[Unicode] ယခုလအတွင်း ထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends: Wild Rift (Alpha ဗားရှင်း) ထဲမှာ ဘာတွေပါလာမလဲ? မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းပရိသတ်များ ကာလရှည်ကြာစွာ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ League of Legends: Wild Rift ရဲ့ alpha ဗားရှင်းဟာ ယခုလအတွင်းမှာပဲ ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ Riot ဟာ Wild Rift ကို အပြီးသတ်တရားဝင် မထုတ်သေးခင် ယခု alpha ဗားရှင်းနဲ့ စမ်းသပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ၂ နိုင်ငံမှာသာ ဖြန့်ချိသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Wild Rift ရဲ့ alpha စမ်းသပ်ကာလဟာ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး …
ယခုလအတွင်း ထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends: Wild Rift (Alpha ဗားရှင်း) ထဲမှာ ဘာတွေပါလာမလဲ? Read More »
[Unicode] ယခုလအတွင်း ထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends ရဲ့ ကတ်ဂိမ်းအသစ် Riot Games က ထုတ်လုပ်မယ့် ကတ်ဂိမ်းအမျိုးအစား League of Runeterra ဟာ League of Legends universe ကြီးအတွင်းမှာ အကြုံးဝင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Riot ဟာ ယခု ၂၀၂၀ အတွင်းမှာ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းများအပါအဝင် ဂိမ်းသစ်အမြောက်အများကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ယခင်ထဲက ကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခု Legends of Runterra ရဲ့ beta ဗားရှင်း ကတော့ အားလုံးထဲမှာမှ ပထမဆုံးထွက်ရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Legends of Runeterra ရဲ့ open beta ဟာ ယခုဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ …
ယခုလအတွင်း ထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends ရဲ့ ကတ်ဂိမ်းအသစ် Read More »
League of Legends ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းဂိမ်း League of Legends: Wild Rift တရားဝင်ကြေညာ
[Unicode] League of Legends ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းဂိမ်း League of Legends: Wild Rift တရားဝင်ကြေညာ MOBA ဂိမ်းများကို နှစ်သက်စွာ ကစားကြတဲ့ gamer များအတွက် တိကျတဲ့ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ League of Legends ရဲ့ မိုဘိုင်းဗားရှင်းဂိမ်းကို မကြာမီဖြန့်ချိတော့မှာဖြစ်ကြောင်း Riot Games က တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ League of Legends ရဲ့ ၁၀ နှစ်ပြည့် အခန်းအနားမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ League of Legends ရဲ့ မိုဘိုင်းဗားရှင်းကို League of Legends: Wild Rift …
League of Legends ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းဂိမ်း League of Legends: Wild Rift တရားဝင်ကြေညာ Read More »